Nanodina vary lo tany Toamasina : polisy iray nosamborina teo an-tokontaniny | NewsMada
Nanodina vary lo tany Toamasina : polisy iray nosamborina teo an-tokontaniny
Par Taratra sur 28/12/2017
Tratran’ny mpitandro filaminana tao Toamasina teo an- tokontaniny ny polisy iray sy ny vadiny, nampidina vary lo sy efa simba. Mampanahy ny raharaha satria voalaza fa misy zandary iray sy mpiasan’ny fitantanam- paritry ny Varotra koa niray afera taminy.
Nahazo vaovao tamin’ny olon-tsotra iray ny préfet-n’i Toamasina, ny alin’ny 24 desambra teo, tokony ho tamin’ny 9 ora alina. Voalaza fa misy kamiao iray mitondra kaontenera manala vary ao Tanambao V. Nomeny baiko avy eo ny kaomandan’ny vondrom-paritra atsinanana ny zandarimaria, ny kolonely Ralaikoa Gabriel sy ny kaomiseran’ny polisy, Razafindahy Manitra ary ny fitantanam-paritry ny varotra hijery eny an-toerana.
Vokany, tratra ambodiomby tao an-tokontanin’ny polisy iray ilay kamiao nitondra vary, nahitana 525 kitapo. Nosamborina izy ary anenjehana azy ny fanodinkodinana vary efa nogiazan’ny fanjakana sy fanomanana fanapariahana vary lo eny an-tsena. Tratra niaraka taminy koa ny vadiny. Voalaza fa efa tratra tamin’ny raharaha vary toy izao ity polisy ity, ny taona 2011, saingy tafaverina amin’ny maha polisy azy indray taty aoriana.
Misy namany hafa
Mampanahy ity raharaha ity, satria mandrahona tsy hanaiky hitondrana an’ity polisy ity eny amin’ny fitsarana ny namany ao amin’ny polisin’ny Uir raha tsy miaraka aminy koa ny zandary niaraka taminy, miampy mpiasan’ny fitantanam-barotra Toamasina.
Nilaza ny kolonely Ralaikoa Gabriel fa tsy afaka natao famotorana ilay ramatoa vadiny satria narary tampoka. Tsy tokony hasiana resaka polisy ny raharaha fa tratra ambodiomby izy io.
Araka ny fanadihadiana, mety ho vary efa tamin’ny taona 2014, efa lo sy simba, sy anisan’ireo tokony nodorana teny Antanandava ireo vary ireo.
Une réponse à "Nanodina vary lo tany Toamasina : polisy iray nosamborina teo an-tokontaniny"
Mpandinika444 28/12/2017 à 16:20
Nilaza ho narary tampoka ilay ramatoa vadin’ny polisy! Tsy mahagaga izany satria efa tetika mahatra ny manao mody marary rehefa tratra amin’ny raha tsy manjary.